Gallery 3D Museum (3D Art in Paradise) ~ Journey-Assist - Pattaya
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Museum 3D Gallery (Tranga 3D ao amin'ny Paradisa)
Museum 3D Gallery Art in Paradise (3D Art in Paradise). 3D Museum of Art any Pattaya
Topimaso ny Gallery 3D (Museum of Art in 3D) any Pattaya
Zavakanto 3D Museum amin'ny Paradisa (Zavakanto 3D ao amin'ny Paradisa) Pattaya amin'ny sari-tany
Ny andro ankehitriny manakaiky ny galera 3D any Pattaya
Sary sy horonan-tsary avy amin'ny galera 3D any Pattaya
Hotely akaikin'ny Pattaya 3D Art in Paradise Gallery
3D Art in Paradise Review (Google reviews)
3D hevitra ao amin'ny Paradise (Tripadvisor) hevitra
Ny Gallery dia hanana fahafahana misintona rindranasa manokana amin'ny telefaonao (rohy misintona dia hosoratana eo amin'ny rindrina eo am-baravarana), izay ahafahanao mamelona indray ny sary hoso-doko ("Augmented Reality"). Indrisy anefa, ny fampiharana dia efa "anton-taona" ary tsy nahomby tamin'ny telefaona maoderina. Noho izany, matetika dia mihazakazaka ho an'ny "manafintohina" izany, ary ny famahana ny sary dia ambany kalitao ary ambany ny vahaolana farany. Antsoina ny fampiharana Zavakanto any am-paradisa. Azonao atao ny misintona mialoha amin'ireo rohy eto ambany:
Ny fitsidihana ny vidin'ny galie
Zavakanto any am-paradisa
sy ny fomba fiasa.
Tranonkala ofisialy http://www.artinparadise.co.th/
3D Art in Paradise Gallery amin'ny sarintany
Weather to akaikin'ny Museum of Art (3D Art in Paradise) any Pattaya
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany dia mahita ny toetr'andro manakaiky ny Museum of Art (3D Art in Paradise) any Pattaya. Ao amin'ny faran'ny fidirana ny zoro dia fandaharam-potoana ahafahanao mandroso, amin'ny alàlan'ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Mozean'ny zavakanto amin'ny 3D (3D Art in Paradise). Sary sy horonan-tsary
Hotely amin'ny Art in Paradise Pattaya
Hevitra ho an'ny Gallery 3D any Pattaya (valin'ny Google)
Hevitra ho an'ny galeri 3D ao Pattaya (Tripadvisor.ru)